Dowlada Kenya oo Damacsan in dhaqaale ka sameyso Soomaalida u dalxiis tagta dalkeeda. - Awdinle Online
Dowlada Kenya oo Damacsan in dhaqaale ka sameyso Soomaalida u dalxiis tagta dalkeeda.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda Kenya Macharia Kamau ayaa ka hadlay damaca Kenya ee ah in ay dhaqaale ka sameeyaan Soomaalida sanad waliba u dalxiis tagta dalkaas & loolanka xooggan oo ay la galayaan Dowlado kala duwan.
Waxa uu sheegay in sanad waliba Dal ku galka Kenya ay siiyaan 32,268-ruux oo dalxiis ahaan u tago waddankaas, balse qorshahooda uu yahay in ay kordhiyaan tiradaan, habka ugu fududna uu yahay in aan la adkeyn Fiisaha dalkaas.
Waxa uu tilmaamay in ay jiraan Dowlado kala duwan oo diyaaradahooda Duullimaadyo ka sameeya Soomaaliya isla markaana dhaqaale badan ka hela Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee booqaneysa dalalkooda.
Tusaale ayuu usoo qaatay Uganda, Jabuut, Itoobiya & Turkiga oo dhammaantood Diyaaradahooda soo caga-dhigta Muqdisho, balse rabitaankooda ugu weyn uu yahay in ay adeegsadaan Diyaaradda Kenya Airways.
Meelaha ay dhaqaalaha ka helayaan waxa uu ku tilmaamay isu socodka Ganacsiga, Dalxiiska, Hoteelada la dego & wada shaqeynta labada dal oo wax waliba fure ah si dhaqaalahaas u muuqda ay u hantiso Dowladda Kenya.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda Kenya Macharia Kamau waxa uu si cad u sheegay in uusan xiriir wanaagsan ka dhaxeyn labada Dowladood waa Soomaaliya & Kenya, balse waxa uu rajeeyay in Dalka uu ka dhaco isbadal cusub oo uu ula jeedo doorashada 20/21.
“Soomaaliya ayaan usoo safarnay aniga & wafdi kooban oo ka socda wasaarada arimaha dibada oo ay ka mid qayb ka yihiin agaasimaha waaxda shaqaalaha, maaraynta iyo khubaro kale si aan u eegno xaaladda kooxdeena diblomaasiyadeed ee Soomaaliya Joogta” ayuu yiri Xoghaye Kamau.
Waxa uu dul istaagay cilaaqaadka dhanka Shacabka isaga oo sheegay in Soomaaliya ay kunool yihiin Qiyaastii 35,000 Kenyan ah, halka dalkiisa ay ku sugan yihiin 1.5 Milayn oo Qaxooti ah, isla markaana ku sugan Xeryaha Kenya dejisay.
Dowladda Kenya ayaa waddooyin kala duwan usoo martay dib usoo celinta xiriirka Siyaasadeed ee Soomaaliya gaar ahaan Ganacsiga Qaadka oo ah waxa ugu weyn ee kurbada ku hayo, maadaama maalin waliba dhaqaale badan ay ku khasaarto suuqii ay ku lahayd Soomaaliya.
Isha: Star Awdinle.com
Previous articleDowladda Soomaaliya oo Ciidamo u dirtay degaankii dadka lagu laayay
Next articleMadaxweynihii hore ee Mareykanka oo Hambalyo u diray Madaxweynaha la doortay Joe Biden